Gabar 4 Jir Ah Oo Fanaanimo Kusoo Baxday. Layaab - Daawo VIDEO. - iftineducation.com
Gabar 4 Jir Ah Oo Fanaanimo Kusoo Baxday. Layaab – Daawo VIDEO.
aadan21 / January 24, 2012
gabar 4 jir ah oo fanaanimo ku soo baxday
iftineducation.com – Kaitlyn Maher Waa gabar Afar jir ah isla markaana kuso baxday Qiimeenta fanaaniinta iyadoo ku heeseysa hadalo Cajiib galinaya dhamaan dheg wax maqasho oo kale”When You Wish Upon A Star” Hadaba Fanaaniinta Maraykanka ayaa noqonaya kuwa maalinba maalinta ka danbeeya aad ugu sii kordhaya Da’ayarta kuso biiraya.
Justin Baiber oo ah Fanaanka Da’ayar kana soo jeeda Dalka Canada ayaa sanadihii laso dhaafay noqonayay mid aad u cajiib galshay Dadweyna hadana ah fanaaniinta ugu taageerada badan fanka Luuqada qalaad , gabadhan afar jirka ah ayaa la filayaa in eey kaalin wanaagsan ka soo gali doonto Fanka.
Hadaba Kaitlyn Maher oo aad ugu wanaagsan Qoob ka ciyaarka ayaa kolka ay masraxa soo korto aad usoo jiidato Dhamaan Shacbiyaadka daawanaya , Waxaa dhacda in Marmarka qaar si toos ah Uga heesto Masraxa iyadoon waxba baqdin ah isku abuurin.
Layaabka Aduunka – 7 Jir Jecel Lajiran!
Akhwaanul Muslimiin oo Qabtay Hogaanka Baarlamanka Mesir